5-da Qalad ee ugu Danbeysa ee laga Fogaado Qalabaynta Suuqgeynta | Martech Zone
Talaado, Disembar 13, 2016 Arbacada, December 14, 2016 Anthony Bergs
Qalabaynta suuqgeynta ayaa ah tiknoolajiyad aad u xoog badan oo beddeshay habka ganacsiyada ay u sameeyaan suuq-geynta dijitaalka ah. Waxay kordhisaa waxtarka suuq-geynta iyadoo hoos loodhacayo xad dhaafka laxiriira iyadoo lakala shaqeynayo soo noqnoqoshada iibka iyo geedi socodka suuqgeynta. Shirkadaha dhammaan noocyadu waxay ka faa'iideysan karaan otomaatiga suuq-geynta waxayna ku kordhin karaan jiilkooda hoggaanka iyo sidoo kale dadaalka dhismaha.
In ka badan 50% shirkadaha ayaa mar horeba adeegsanaya otomaatiga suuq geynta, iyo in ku dhow 70% inta soo hartay waxay qorsheynayaan inay adeegsadaan 6-12 bilood ee soo socda. Waxaa xusid mudan in in yar oo kamida shirkadaha adeegsada otomaatiga suuq geynta ay la kulmeen natiijooyinka la rabay. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay sameeyaan khaladaad caan ah oo carqaladeeya ololahooda suuqgeynta. Haddii aad qorsheyneyso inaad u adeegsato otomaatigga Suuqgeynta shirkaddaada, iska ilaali khaladaadkan si aad u kordhiso fursadahaaga guusha ee teknolojiyadda suuqgeynta ugu dambeysay:
Iibsiga Barxadda Qalabaynta Suuqgeynta Qaldan
Si ka duwan barnaamijyada kale ee teknolojiyadda suuqgeynta sida suuqgeynta iimaylka ama aaladaha warbaahinta bulshada, otomatiga suuqgeynta wuxuu u baahan yahay isdhaxgalka ugu dhow ee softiweerka akoonnada warbaahinta bulshada, bogagga internetka, CRM jira iyo tikniyoolajiyadaha kale ee raadraaca. Dhammaan qalabka otomaatigga looma wada simin marka la eego qaababka iyo iswaafajinta. Shirkado badan ayaa iibsada softiweerka oo keliya iyadoo lagu saleynayo astaamaha iyo faa'iidooyinka ay yeelan karaan. Haddii software-ka cusubi aanu la jaan qaadi karin nidaamkaaga jira, wuxuu ku dhammaanayaa abuurista jahwareer ay adag tahay in la xalliyo.
Samee cilmi baaris ballaaran iyo baaritaanka demo kahor intaadan dhameystirin barnaamijka otomatiga ee shirkaddaada. Software-ka aan is-waafaqi karin ayaa wax yar gaari doona, iyadoo aan loo eegin waxtarka iyo astaamaha ay bixiso.
Tayada Macluumaadka Macaamilkaaga
Xogtu waxay udub dhexaad u tahay otomaatiga suuq geynta. Tayada liidata ee xogta waxay soo saartaa natiijo xun iyadoon loo eegin istiraatiijiyad suuqgeynta codka iyo hirgelinteeda hufan. Ku dhowaad 25% cinwaanada emaylka ayaa dhaca sanad kasta. Taasi waxay ka dhigan tahay, xog ururin 10,000 oo email ids ah waxay yeelan doontaa oo keliya 5625 saxan oo sax ah muddo gaaban oo labo sano gudahood ah. Email-yada aan firfircooneyn ayaa sidoo kale keena cilado wax u dhimaya sumcadda emaylka emaylka.
Waa inaad meel dhigtaa si aad u nadiifiso keydka keydka xilliyada qaarkood. Maqnaanshaha farsamadan oo kale, ma awoodi doontid inaad qiil u hesho soo noqoshada maalgashiga otomaatiga suuqgeynta.
Tayada oo liidata
Qalabaynta suuqgeynta kuma shaqeyso go'doon. Waxaad ubaahantahay inaad soo saarto waxyaabo tayo sare leh oo kordhiya kaqeybgalka macaamiisha. Waxaa xusid mudan in otomaatiga suuq geynta si loogu guuleysto, kaqeybgalka macaamiisha waa waajib. Haddii aad hirgeliso otomatiga suuq geynta adigoon maalgalin dadaal badan oo ku saabsan soo saarista waxyaabo tayo leh si joogto ah, waxay u horseedi kartaa musiibo buuxda.
Waxaa muhiim ah in la aqoonsado muhiimada nuxurka oo la yeesho istiraatiijiyad cod leh oo lagu daaweynayo waxyaabaha tayada leh si joogto ah.
Isticmaalka Sub-fiicnayn ee Qalabka Platform
Ka mid ah shirkadaha qaatay qalabaynta suuqgeynta, kaliya 10% ayaa isticmaalay dhammaan astaamaha barnaamijka. Ujeeddada ugu dambeysa ee isticmaalka otomaatigga waa in laga tirtiro faragelinta aadanaha howlaha soo noqnoqda. Si kastaba ha noqotee, haddii software-ka aan si buuxda looga faa'iideysan, shaqada gacanta ee waaxda suuq-geynta ma yareyn doonto. Saas ma aha, habka suuq-geynta iyo warbixintu waxay noqon doonaan kuwo kacsan oo u nugul khaladaadka laga hortagi karo.
Markaad go'aansato inaad dhexgasho otomatiga suuqgeynta, hubi in kooxda ay soo marto tababar ballaaran oo ku saabsan adeegsiga astaamaha barnaamijka. Haddii iibiyuhu uusan bixin tababarka ugu horreeya, markaa xubnaha kooxdaadu waa inay waqti muhiim ah ku qaataan bogga ilaha barnaamijka oo ay fahmaan nashaadaadka sheyga.
Ku tiirsanaanta xad dhaafka ah ee Emailka
Qalabaynta suuqgeynta waxay ka bilaabatay otomaatiga iimaylka suuqgeynta. Si kastaba ha noqotee, qaabkeeda hadda, barnaamijka waxaa ku jira ku dhowaad dhammaan kanaalada dhijitaalka ah. In kasta oo aad qaadatay otomaatiga suuq-geynta, haddii aad weli ku tiirsan tahay inta badan emaylka si aad u soo saartid hoggaamiyeyaal, haddana waa waqtigii dib looga fakari lahaa dhammaan istiraatiijiyadda suuqgeynta. Ka faa'iideyso warbaahinta kale sida bulshada, makiinadaha raadinta iyo degellada si aad u siiso macaamiil khibrad aan kala go 'lahayn si ay u gaaraan himilooyinkooda. Ku tiirsanaanta xad dhaafka ah ee emaylka ayaa sidoo kale ka careysiin karta macaamiisha illaa iyo inta ay bilaabayaan nacaybka shirkadaada.
Si loo helo soo-celinta ugu badan ee maalgashiga suuq-geynta suuq-geynta, waxaad u baahan tahay inaad isku-darto dhammaan kanaallada oo aad uga faa'iideysato awood kasta kanaal si aad ugu beddesho rajada macaamiisha.
Qalabaynta suuqgeynta waxay u baahan tahay maalgelin bilow ah oo muhiim ah marka loo eego waqtiga iyo lacagta. Maaha hal guji software sixir ah oo xallin kara caqabadahaaga suuqgeynta. Marka, kahor intaadan go'aan ka gaarin inaad iibsato qalab otomaatig ah oo suuqgeyn ah, hubi inaad waqtiga ka qaadatid jadwalka hadda jira si aad si buuxda ugu dhex gasho nidaamka.
Intaa waxaa sii dheer, ku dhiirrigeli xubnahaaga kooxda inay bartaan waxyaabo cusub oo ay u habeeyaan xalka ku saleysan shuruudahaaga. Xaaladaha qaarkood, waxaad xitaa weydiisan kartaa iibiyaha inuu u habeeyo nidaam gaar ah sida ku xusan shuruudahaaga gaarka ah. Ujeeddada ugu dambeysa waa inay noqotaa in laga tirtiro faragelinta aadanaha ka soo noqnoqoshada howlaha suuq geynta iyo otomaatiga wareegga nolosha ee wax iibsiga.
Tags: qalabayntaavoidersuuq-geynta suuqakhaladaadka otomaatiga suuqgeyntaqaladaad
Anthony waa maamule mashruuc Qorayaasha Saacaddiiba halkaas oo uu adeegsado istiraatiijiyado kala duwan oo shakhsi ahaaneed si uu si wax ku ool ah ugu suuq geeyo ganacsiyada macaamiishiisa. Waqti la'aan ama rabitaan aad ku qorto warqaddaada? Sii adeegyadeena qorista xirfadeed iskuday oo miisaanka ha uga soo dhaco garbahaaga! Waxaan kaa badbaadin doonaa saacado wareer iyo culeys adiga oo qayb libaax ka qaadanaya shaqada adiga.
Shakhsiyeynta Suuqgeynta: 4 Fureyaasha Aasaasida Guusha
14, 2016 at 9: 47 AM
Maqaal aad u xiiso badan. Waan ku faraxsanahay inaad sheegtey in otomaatiga suuq geynta loogu talagalay shirkadaha noocyadooda kala duwan, maxaa yeelay waa quraafaad caadi ah oo kaliya in kuwa waa weyn ay ka faa'iideysan karaan qalabka otomaatiga.
BerDayaanna ✌ (@xDayaannax)
15, 2016 at 5: 33 PM
Maria, waad ku mahadsan tahay jawaab celintaada.
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay. Waa khuraafaad caan ah oo ay tahay in "bus laga dhigo" !!!
28, 2016 at 5: 31 AM
Waad ku mahadsantahay talooyinka. Waxaan qorsheynayaa isku dayga otomaatiga suuq geynta sanadka cusub wax badana waa laga baran karaa. Maxaad u malaynaysaa barnaamijyada, sida GetResponse? Dhibaatada haysata shirkado badan oo yaryar waa miisaaniyadda loogu talagalay suuq geynta softiweerka otomaatiga ah. Kadibna waxaa imanaya waqti loo baahan yahay tababar.
31, 2016 at 1: 17 AM
Hambalyo Edna, waxaad runtii igu dhiirrigelisay inaan la wadaago fikradayda ku aaddan xulashada aaladda Is-beddelka Suuqgeynta. GetResponse waa madal adag - laakiin waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad falanqeyneyso sida aad u isticmaaleyso iyo ilaha aad horay u haysatay. Waxbaan ka qoray isirrada iibsiga madal otomaatig ah oo Suuqgeyn ah halkan.
Farriin weyn, Douglas! Waa inuu u akhriyaa qof kasta oo ka fekeraya inuu iibsado madal otomaatig ah suuqgeyn. Waad ku mahadsantahay wadaagida khibradaada.
Edna, waad ku mahadsan tahay jawaabtaada. Weligay ma isticmaalin GetResponse, markaa dhab ahaan, waxba kama soo jeedin karo. Dhibaato xagga miisaaniyadda ah ayaa haysata shirkadaha yar yar, laakiin waxaan runti dhihi karaa inta badan kiisaska waa u qalmaan. Su'aasha tababarka sidoo kale way jirtaa laakiin qalabka ama softwares badankood waxay bixiyaan tijaabooyin bilaash ah adiga si aad u hubiso in adeeggu uu ku habboon yahay baahidaada ganacsi.